मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ता कला मनोरञ्जनगायन मेरो रहर मात्र हो : चिरञ्जीवी सापकोटा
सञ्चारकर्मी चिरञ्जीवी सापकोटा अहिले मोडलिङ तथा साङ्गीतिक क्षेत्रमा व्यस्त छन् । उनले ‘भाग कोरोना’, ‘इतिहास’, ‘जात’ र अहिको चर्चित गीत ‘हेर यो मुटुमा चिरा प¥या छ’लयागत थुप्रै गीतमा अभिनयसँगै स्वर पनि दिएका छन् । गीत–सङ्गीत, नाटक, वक्तृत्वकला तथा मोडलिङमा रुचि राख्ने सापकोटा गायन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने गर्छन् । सुर्खेतको जागरण एफएमदेखि पत्रकारिता सुरु गरेका सापकोटा रेडियो भेरी एफएममा काम गर्दागर्दै आफ्नो सपना र रहर पूरा गर्न सुर्खेतबाट काठमाडौँ आएका छन् । उनै, सापकोटासँग कोसी अनलाइनले गरेको कुराकानी :
हिजोआज सक्रिया पत्रकारितामा भन्दा पनि अभिनय र मोडलिङतिरै बढी व्यस्त छु । म्युजिक भिडियोहरू आउने क्रम जारी छ, केही म्युजिक भिडियो आइसकेका छन् । दर्शक तथा श्रोताको माया र सल्लाहअनुसार फरक किसिमको भिडियो ल्याउने तयारीमा छु ।
तपाईं गीत पनि गाउनु हुन्छ, भिडियोमा अभिनय पनि गर्नुहुन्छ । आफूलाई सर्जक र मोडलमध्ये कुन परिचयले चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
गीत त म गाउँदिनँ । तर, लकडाउनको समय सदुपयोग गर्न केही सामूहिक विषयमा ¥यापहरू मात्र निकालेको हो । त्यो एउटा रहर मात्र हो । लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेका कारण मचाहिँ आफूलाई एक सञ्चारकर्मीको परिचयले चिनाउन रुचाउँछु ।
म्युजिक भिडियोका साथै कमेडी सिरिज आजकलको लभमा अभिनय गरिरहनुभएको छ । चलचित्रमा अभिनय गर्ने रुचि कत्तिको छ ?
अब तत्कालै त चलचित्रमा अभिनय गरिहाल्ने योजना छैन । केही समय म्युजिक भिडियोमै व्यस्त हुनुपर्छ होला र हिजो सिकेका अभिनयका कुराहरू धेरै बिर्सिसकेको पनि हुनसक्छु । त्यसै कारण अभिनयलाई अझै माझ्नुपर्ने अवस्था छ । यति अवसर मिल्यो भने कुनै चलचित्रमा चरित्र अभिनेताको भूमिका चाहिँ निभाउन सक्छु । सिनेमा गर्ने रुचि त छ तर सिनेमाको हिरो नै बनेर यस्तो फिल्म खेल्छु भन्ने केही सोच बनाएको छैन ।
अगाडिका नयाँ योजना के–के छ्न ?
योजना यिनै हुन, मेरो मिडिया हाउसलाई जारी राख्नुपर्नेछ । मेरो पत्रकारितालाई पनि सँगसँगै अघि लानुपर्नेछ । अलिपछि मिल्यो भने एउटा टेलिभिजन सो ल्याउने योजना बनाएको छु ।